बायर्न म्युनिक च्याम्पियन्स लिगको विजेता हुनु पछाडिका तीन कथा, ‘ट्रेबल’ उपलब्धि -
by Himal १ वर्ष अघि0Comment
फाइनल ‘फाइनल’ जस्तो रहेन । तर बायर्न म्युनिकले आइतबार युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जितेकोमा कसैलाई गुनासो रहने छैन । जुन टिमले जित्नुपर्ने थियो, त्यही टिमले जित्यो । स्कोर खालि १–० रह्यो । गोलका नायक रहे किंग्सले कोमन । जहाँ फाइनलमा बायर्न परिपक्व र गम्भीर देखियो, त्यहीं पेरिस सेन्ट जर्नेन (पीएसजी) को प्रदर्शनमा कहींकतै खोट लगाउने ठाउँ थियो । पीएसजीका दुई ठूला स्टार नेयमर र केलियन एमबाप्पे खासै चम्कन सकेनन् ।
बायर्नले युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उपाधि जितेको यो छैटौंपल्ट हो । अब बायर्नले पनि गर्व गरेर भन्न सक्छ, युरोपमा हामी पनि लामो सफलता इतिहासको क्लब हौं भनेर । पूरा सिजन नै बायर्नका लागि गज्जब रह्यो । उसले यसअघि बुन्डेसलिगा र जर्मन कप पनि जितेको थियो । त्यसो भनेको बायर्नले यसपल्ट तीन ठूला उपाधि जित्यो । त्यसो भनेको ‘ट्रेबल’ उपलब्धि । यो तेहेरो सफलतको तीन प्रमुख कथा भने यस्तो रह्यो :
फाइनल हेर्न म्युनिक र पेरिसमा क्लबका समर्थकको हूल लागेको थियो । म्युनिकमा बायर्न समर्थकहरू बढी पबतिर थिए, आफ्नो टिमको जितपछि उनीहरू सडकमा पनि ओर्लिए । पेरिसमा भने यस्तो भएन । आफ्नो टिम जित्छ भने आसमा ५ हजारको संख्यामा पीएसजीका समर्थक पेरिसको सडक सडकमा थिए, उनीहरूको उद्देश्य खुसियाली मनाउनु थियो ।
१. योग्य क्लबले जित्यो उपाधि
बायर्न म्युनिकका समर्थक त आफ्नो टिमले जितेको स्वाभाविक रूपमा खुसी छन् नै । तिनले योग्य क्लबले नै उपाधि जित्यो पनि भन्ने छन् । तर फाइनलपछि अब धेरैले यस्तै भन्न थालेको छ, वास्तवमै योग्य क्लबले उपाधि जितेको छ । यस्तो भन्नुको पछाडि बायर्न मन परेर होइन, पीएसजी मन नपरेर हो । धेरै तटस्थ फुटबल समर्थकका लागि बायर्नले जित्नु नै ठीक थियो । यसको कारण हो, बायर्नको गर्विलो परम्परा र समृद्ध इतिहास ।
बायर्नमात्र होइन, जर्मनीका अधिकांश क्लब समर्थकको बढीभन्दा बढी सहभागितामा चल्ने गर्छ । भनिन्छ, बायर्नका खास मालिक भनेकै यसकै समर्थक हुन् । तर यही नियम पीएसजीमा लागू हुन्न । पीएसजीको पछाडि कतारी लगानी छ । कतारका धनाढ्य राजपरिवारले यस क्लबमा लगानी गर्न थालेपछि यसले पनि सफलता चाख्न सुरु गरेको हो । खाडी क्षेत्रको तेल शक्तिसँगै पीएसजीमा स्टार खेलाडीको जमघट पनि सुरु भएको हो ।
त्यसपछि उपाधि पनि भित्रिन थालेको हो । तर युरोपेली क्लब फुटबलमा यस्तो प्रवृत्तिलाई निको मानिन्न । पीएसजीमात्र होइन, जर्मनीकै आरबी लाइप्जिगको पनि चर्को विरोध हुने गर्छ र भन्ने गरिन्छ, ‘पैसाले सफलता किन्न सकिन्न ।’ अनि किन्न खोजे पनि दिनुहुन्न । पीएसजीले घरमा त सजिलै लिग जितिरहेको छ, तर युरोपमा भने जित्न सकेको छैन । अझ च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगेकै पहिलोपल्ट हो । कतारी लगानीकर्ताको एकमात्र उद्देश्य भनेकै अब च्याम्पियन्स लिग जित्नु भएको छ ।
फेरि बायर्नले यो पूरा सिजन जसरी खेलेको छ, त्यसको हिसाबमा पनि यो टिम उपाधिको पूरा हकदार छ । च्याम्पियन्स लिगमा कुनै पनि खेल नहारेर जितेको बायर्न नै पहिलो टिम भएको छ । यो यात्रामा खालि जित र जित मात्र छ, बराबरी पनि छैन । यो सिजन बायर्नका लागि ऐतिहासिक नै रह्यो भन्दा हुन्छ । उसले बुन्डेसलिगा त जित्यो नै । जर्मन कप पनि जित्यो । अहिले च्याम्पियन्स लिग जितेको छ । खास कुरा के हो भने बायर्नले राम्रो खेलेर उपाधि जितेको छ, धेरैको मन जितेर उपाधि हात पारेको छ ।
२. प्रशिक्षक फ्लिकको जादू
बायर्न म्युनिकका प्रशिक्षक हुन् हान्सी फ्लिक । उनलाई निकै भलाद्मी प्रशिक्षक मानिन्छ । उनलाई धेरै नाटक गर्न आउँदैन, बरु खुरुखुरु काम गर्न माहिर छन् । बायर्नले यसपल्टको युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जित्नु पछाडि कसैको बढी योगदान रह्यो भने यिनै प्रशिक्षकको थियो । फ्लिक आएपछि त बायर्न अर्कै टिम बनेको थियो । आखिरमा फ्लिकको जादूले काम गर्‍यो । फाइनलपछि उनले गज्जब तर्क पनि प्रस्तुत गरे । उनी भन्थे, सफलता भनेको घरको बहाल तिरेजस्तै हो ।
‘जति बेलासम्म बहाल तिरिरहन्छ, सफलता प्राप्त भइरहन्छ,’
फ्लिक भन्थे । त्यसैले उनले बायर्नले यो सिजन प्राप्त गरेको सफलताको सबै श्रेय आफ्ना खेलाडीलाई दिए । उनको तर्क थियो, खेलाडीले राम्रो खेलेर नै त यो सफलता हात परेको हो । तर तिनै खेलाडीको भनाइ सापटी लिने हो भने भन्न कर नै लाग्छ । जे जति भयो, त्यो यिनै फ्लिकका कारणले हो । फ्लिकले बायर्नलाई पहाडबाट खस्न ठिक्क भएको क्लबमा ज्यान भर्ने काम गरेका थिए । भएको के हो भन्दा नोभेम्बरमा बायर्नले टिमको लगातार खराब र नीरस प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रशिक्षक निको कोभाचलाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि क्लबले राम्रो खेलेर जितोस् भनेर प्रशिक्षणको जिम्मा फ्लिकलाई दिए । उनको यो डेब्यु सिजन थियो, त्यसैले क्लब स्वयं पनि उनीमाथि पूर्णतः विश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । त्यसैले बायर्नले उनलाई निमित्त प्रशिक्षकको जिम्मा मात्र दिएको थियो । त्यसो भनेको अर्को स्थायी प्रशिक्षक नआएसम्म टिम हेर्ने जिम्मा ।
आखिरमा यिनै फ्लिकले बायर्नलाई अद्वितीय सफलता दिलाए । त्यसो त उनीसँग अनुभवको कुनै कमी थिएन । खालि आफू नै प्रमुख भएर प्रशिक्षकको जिम्मेवारी मात्र निभाएका थिएनन् । जर्मन टिममा उनी प्रशिक्षक जोचिम लोका सहायक थिए । बायर्नमा हर्ताकर्ता प्रशिक्षक भएपछि उनले यो क्लबलाई युरोपकै च्याम्पियन टिम बनाएका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनी आएपछि फेरि एकपल्ट बायर्न युरोपको महाशक्ति क्लब भएको छ, नत्र यो जर्मनकै मात्र शक्ति थियो ।
३. म्युनिकमा खुसी, पेरिसमा हुलदंगा
आइतबारको फाइनल दुई सहरको कथा पनि थियो । यो खेल रंगशालामै गएर हेर्न त अवसर थिएन । त्यसैले फाइनल हेर्न म्युनिक र पेरिसमा क्लबका समर्थकको हूल लागेको थियो । म्युनिकमा बायर्न समर्थकहरू बढी पबतिर थिए, आफ्नो टिमको जितपछि उनीहरू सडकमा पनि ओर्लिए । पेरिसमा भने यस्तो भएन । आफ्नो टिम जित्छ भने आसमा ५ हजारको संख्यामा पीएसजीका समर्थक पेरिसको सडक सडकमा थिए, उनीहरूको उद्देश्य खुसियाली मनाउनु थियो ।
तर खेलको अन्त्य तिनीहरूले चाहे जस्तो भएन, त्यसैले तिनीहरू लगभग मध्यरात पेरिसका प्रहरीसँग झगडा गर्न थाले । खेलपछि पीएसजीका प्रमुख खेलाडी नेयमर मैदानमै रोएको पनि देखियो । यसले क्लबका समर्थकलाई भावुक पनि बनाइदियो । सुरुमा समर्थकबाट प्रहरीमाथि आक्रमण प्रयास भएको थियो, उत्तरमा प्रहरीको तर्फबाट पनि अश्रुग्यास प्रहार भयो । स्थिति हुलदंगाकै थियो । समर्थकलाई प्रहरीले लखेट्न थालेपछि भागाभाग भएको थियो ।
पेरिसमा यी पीएसजी समर्थकलाई बढी आक्रोश के कुरामा थियो होला त ? खासमा फाइनलपछि एक फ्रान्सेली खुसी थिए । अझ ती पेरिसवासी नै थिए । उनीहरू अरू कोही होइनन्, किंग्सले कोमन थिए । अर्थात् फाइनलका एक मात्र गोलकर्ता । पोर्चुगाली राजधानी लिस्बनको स्टाडियो डा लुइजमा उनी एक्ला त्यस्ता भाग्यमानी थिए । फ्रान्सेली अनि पेरिसवासी पनि । अझ उनी त खासमा पीएसजीकै पुराना खेलाडी हुन्, क्लबको एकेडेमीबाट उत्पादित खेलाडीसमेत ।
यो खेलमा अर्को एक सहर पनि जोडिन्छ । यो हो, मार्से । फ्रान्सकै सहर हो यो । यसको पनि आफ्नै प्रख्यात क्लब छ, मार्से । यो सहरमा भने फाइनलपछि खुसियालीको लहर चलेको थियो । मार्से क्लबका समर्थक सडकमा ओर्लिए । लाग्थ्यो, मार्सेले कुनै उपाधि जितेको थियो । खासमा मार्से पीएसजीको खास शत्रु क्लब हो । फेरि मार्से नै युरोपेली उपाधि जित्ने एक मात्र फ्रान्सेली क्लब हो । पीएसजी फाइनलमा पराजित भएपछि यो सम्मान त कायम रहने नै भयो, त्यसैले मार्सेका समर्थकले पनि सडकमा ओर्लिएर खुसी मनाए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
by Ramesh २६ मिनेट अघि
by Ramesh ३० मिनेट अघि
by Ramesh ३४ मिनेट अघि